बुबा छोरालाई चिकित्सक बनाउन चाहन्थे । छोरा यति जेहेन्दार थिएन कि एमबीबिएसमा नाम निकाल्न सकोस । दलालको माध्यमबाट एमबीबीएसको सीट किन्नको लागि कुरा मिलाइयो । जग्गा, जमिन, सम्पत्ति, गहना सबै धरौटी राखेर ३५ लाख रुपैयाँ दलाललाई दिए तर त्यहाँ ठगिए ।
फेरी पनि जेन तेन गरेर केटालाई विदेशमा भर्ना गराइयो, त्यहाँ पनि उसले केही ख़ास गर्न सकेन । असफल हुन थाल्यो .. डि प्रेसनमा गयो । रक्षाबन्धनमा घर आएर झु-ण्डि एर मरी हाल्यो । २० दिन पछि आमाबाबु र बहिनीले पनि किटनाशक खाएर आ त्मह त्या गरे।
छोरोलाई डाक्टर बनाउने गलत महत्वाकांक्षाले पूरै परिवार बर्बाद भयो । अभिभावकहरू आफ्ना सपनाहरू र आफ्ना महत्वाकांक्षाहरू आफ्ना बच्चाहरू बाट पूरा गर्न चाहन्छन् …! अक्सर देखिन्छ कि केही आमाबुबाहरु आफ्ना बच्चाहरुलाई टपर बनाउनको लागि यति धेरै अनियन्त्रित दबाब दिने गर्दछन कि बच्चाको प्राकृतिक विकास नै रोकिन जान्छ ।
आधुनिक स्कूली शिक्षा बच्चाहरुको मूल्यांकन र ग्रेडिंग यसरी गर्ने गर्दछ जसरी स्याउको बगैचामा स्याउको खेती गरिन्छ । देशभरका लाखौं बच्चाहरूलाई एउटै पाठ्यक्रम पढ़ाईदैछ ।
उदाहरण को लागी – जंगल मा सबै जनावरहरुलाई एकत्र गरेर उनिहरुको परीक्षा लिईदैछ र रूखमा चढ्न सक्ने क्षमतालाई आधार मानेर श्रेणीकरण (ranking) गरिंदैछ । यस्तो शिक्षा प्रणालीले यो बिर्सन्छ कि यस प्रश्नपत्रमा त हात्तीको बच्चा विफल हुन्छ र बाँदर सधैं पहिलो नम्बरमा आउँछ ।
अब पूरै जंगल भित्र यो कुरा फैलियो कि सफल त्यो मात्र हुन्छ जसले छिटो उफ्रिएर रूखमा चढ़न सक्छ । बाकी सबैको जीवन अर्थहीन छ ।
तसर्थ, तीं सबै जनावरहरूका बच्चाहरुको लागि कोचिंग संस्थानहरू खोलिन थालिए जो उफ्रिने बित्तिकै रूखमा चढ्न सक्दैन थिए, त्यहाँ तीं बच्चाहरूलाई रूखमा चढ्न सिकाइदैछ । अब लागे सबै हात्ती, जिराफ, सिंह, गोरु, भैंसी र समुद्री माछा आफ्ना बच्चाहरु संग कोचिंग संस्थानतर्फ …… हाम्रो बाबू पनि रूखमा चढ्नेछ र हाम्रो नाम उज्यालो बनाउनेछ ।
हात्तीको घरमा छोरा जन्मियो…….बाबुले छोरालाई काखिमा लिंदै भन्छ, “अब हाम्रो जीवनको एउटै उद्देश्य छ कि हाम्रो छोरा रूखमा चढ्नेछ ।” तर छोराले रूखमा चढ्न नसक्दा अंततः हात्तीले परिवारसमेत आत्महत्या गर्छ ।
आफ्नो बच्चालाई चिन्नुहोस् । त्यो के हो, जान्नुहोस् । हात्ती होकि, वा सिंह हो की, हाइना, जिराफ, ऊँट वा माछा वा कोयल ? के थाहा त्यो कमिलो पो हो कि ? र यदि तपाइँको बच्चा कमिला हो भने पनि, निराश नहुनुहोस् । कमिला पृथ्वीमा सब भन्दा अनुशासित (Disciplined), निरन्तरता (Continuity) सँग काम गर्ने र कडा परिश्रम (Hard work) गर्ने जीव हो र यसले आफ्नो वजनभन्दा हजार गुणा बढी भार उठाउन सक्छ ।
त्यसैले आफ्ना बच्चाहरूको क्षमताको परीक्षण गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई जीवनमा अगाडि बढ्न प्रोत्साहित गर्नुहोस् ..! न आफै निराश हुनुहोस् ……न उनीहरुलाई हुन दिनुहोस ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिबार, भदौ ६, २०७७ १६:४७:५३
बिहेअघि दुब्ला पातला रहेका अधिकांश युवतीहरु विवाहपछि मोटाउँछन् किन ?